Itinye n'ọkwa Heating Device for brazing, melting, annealing, soldering, wdg.
Home / nnukwu mbido ọkụ ọkụ / Ngwaọrụ Kpo oku
Category: nnukwu mbido ọkụ ọkụ Tags: zụta ihe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, elu ikuku ugboro ugboro, sistemu kpo oku nke ukwu, igwe na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, itinye n'ọkwa okpomọkụ ngwaọrụ, itinye n'ọkwa okpomọkụ, itinye n'ọkwa kpo oku, ntinye ngwa oku, ntinye igwe kpo oku, itinye n'ọkwa kpo oku, induction kpo oku, induction usoro oku
Itinye n'ọkwa Ngwaọrụ Ngwaọrụ Ngwa
HLQ Induction Heating Machine Co na-arụpụta ọtụtụ dị iche iche itinye n'ọkwa kpo oku ngwaọrụ gụnyere usoro nchịkwa ugboro ugboro, usoro mgbasa ozi ugboro ugboro, usoro ikpo ọkụ ugboro ugboro maka ikpo ọkụ, brazing, ịkwa, melite, njikọ, welding, hardening and heating treat surface applications and for replace.
Ihe Njirimara Akwa:
IGBT modul na teknụzụ na-agbanwe agbanwe dị ka na mmepụta nke generator, enwere ike ịdabere na ya.
Obere na obere, iji tụnyere igwe na-achịkwa SCR naanị 1 / 10 na-arụ ọrụ dị mkpa. Akwa arụmọrụ iji chekwaa ike, ike dị elu na ike dị anya nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ
Igwe ọkụ na-agbanwe agbanwe na nnukwu ugboro ole sitere na 1KHz ruo 2.0MHz, nwụnye nwere ike ịme ngwa ngwa dịka akwụkwọ ntuziaka anyị si dị.
100% ntụgharị ọrụ, ike ọrụ na-aga n'ihu na ike.
Ike mgbe niile ma ọ bụ mgbe niile na-achịkwa volta.
Ngosipụta nke ike mmepụta, oge mmepụta, na voltapụta ihe.
Series model Ike nbanye Max Nbanye ọsọ ọsọ Max Oscillate ugboro ọsọ ọsọ voltaji Ụdị ọrụ
DW-MF-15 ntinye mmeputa 15KW 23A 1KHz-20KHz Dịka ngwa ahụ si dị 3phases380V ± 10% 100%
DW-MF-25 ntinye mmeputa 25KW 36A
DW-MF-45 ntinye mmeputa 45KW 68A
DW-MF-70 ntinye mmeputa 70KW 105A
DW-MF-90 ntinye mmeputa 90KW 135A
DW-MF-110 ntinye mmeputa 110KW 170A
DW-MF-160 ntinye mmeputa 160KW 240A
DW-MF-300 ntinye mmeputa 300KW 400A
DW-MF-45 Ngwunye Mkpanaka Na-agba Ọkụ Na-agba Ọkụ 45KW 68A 1KHz-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
DW-MF-70 Ngwunye Mkpanaka Na-agba Ọkụ Na-agba Ọkụ 70KW 105A
DW-MF-90 Ngwunye Mkpanaka Na-agba Ọkụ Na-agba Ọkụ 90KW 135A
DW-MF-110 Ngwunye Mkpanaka Na-agba Ọkụ Na-agba Ọkụ 110KW 170A
DW-MF-160 Ngwunye Mkpanaka Na-agba Ọkụ Na-agba Ọkụ 160KW 240A
DW-MF-15 Ọkụ Na-agbaze Ọkụ 15KW 23A 1K-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
DW-MF-25 Ọkụ Na-agbaze Ọkụ 25KW 36A
DW-MF-35 Ọkụ Na-agbaze Ọkụ 35KW 51A
DW-MF-45 Ọkụ Na-agbaze Ọkụ 45KW 68A
DW-MF-70 Ọkụ Na-agbaze Ọkụ 70KW 105A
DW-MF-90 Ọkụ Na-agbaze Ọkụ 90KW 135A
DW-MF-110 nkwụsị ọkụ 110KW 170A
DW-MF-160 nkwụsị ọkụ 160KW 240A
Ngwaọrụ DW-MF-110 110KW 170A 1K-8KHz 3phases380V ± 10% 100%
DW-MF-160Induction Na-arụ ọrụ ike 160KW 240A
Usoro DW-HF-15 DW-HF-15KW 15KVA 32A 30-100KHz Mpaghara 220V naanị 80%
Usoro DW-HF-25 DW-HF-25KW-A 25KVA 23A 20K-80KHz 3phases380V ± 10% 100%
Usoro DW-HF-35 DW-HF-35KW-B 35KVA 51A
Usoro DW-HF-45 DW-HF-45KW-B 45KVA 68A
Usoro DW-HF-60 DW-HF-60KW-B 60KVA 105A
Usoro DW-HF-80 DW-HF-80KW-B 80KVA 130A
Usoro DW-HF-90 DW-HF-90KW-B 90KVA 160A
Usoro DW-HF-120 DW-HF-120KW-B 120KVA 200A
Usoro DW-HF-160 DW-HF-160KW-B 160KVA 260A
Ozizi nke ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ
N'ime ngwaọrụ ndị a na-ekpo ọkụ, a na-etinye usoro oscillating usoro, site na ntụgharị dị elu, ọkụ dị ala na ike dị ugbu a iji pụta site na eriri ntinye.
Ngwa DW-HF-15KW na DW-HF-25KW bụ ụdị ndị mbụ mepụtara na ụlọ ọrụ anyị, na-eji MOSFET na IGBT akụrụngwa na ọgbọ mbụ anyị na-agbanwe teknụzụ njikwa, e gosipụtara igwe ndị ahụ na usoro dị mfe, ntụkwasị obi dị elu na ọnụ ala, yana ha dị mfe iji na ịrụzi, ma ugbu a bụ igwe kachasị eji eme ihe na China na mba ọzọ.
Na usoro DW-HF-35KW na usoro DW-HF-45KW itinye n'ọkwa kpo oku igwe, IGBT modul na ọgbọ nke abụọ anyị ejirila teknụzụ njikwa, nke ahụ bụ njikwa abụọ na teknụzụ ntụgharị. Na teknụzụ ọhụrụ ndị a, a na-achịkwa ike mmepụta na oscillating frequency na-enweghị onwe ha. anyị na-eji akụrụngwa IGBT na voltage dị elu na-achịkwa sekit iji chịkwaa ike ma anyị na-eji ihe ndị IGBT, usoro oscillating na eriri elegharị anya iji ruo ngbanwe dị nro na usoro ntụgharị, ihe ndị a niile na-eme ka igwe ahụ bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma mee ka igwe ahụ nwee ike. na-arụ ọrụ mgbe niile na 100% ọrụ okirikiri.
E jiri ya tụnyere igwe na teknụzụ ọgbọ mbụ, teknụzụ nke abụọ na-adabara igwe ọrụ ike buru ibu iji nwee ntụkwasị obi dị elu.
N'ihi na ịmalite usoro teknụzụ dị elu, igwe DW-HF-35KW na DW-HF-45KW na-arụ ọrụ site na nnukwu oge dị iche iche, obere nha, mmiri na-eme ka mmiri gbanwee, ntụkwasị obi dị elu na ụgwọ nrụzi dị ala.
N'ime usoro DW-HF-70KW ntinye ngwa ikpo oku, Modul IGBT na ọgbọ nke atọ anyị na-ejikwa teknụzụ na-agbanwe agbanwe, nke ahụ bụ nro na njikwa abụọ na teknụzụ inverting. Na teknụzụ a, enwere ike ịchịkwa ikike na ugboro ugboro na iche iche, modulu IGBT na teknụzụ na-agbanwe agbanwe dị nro na-eji sistemụ ntụgharị dị elu iji chịkwaa ikike mmepụta. Na sekit inverting, a na-etinye IGBT na sekit na-achọpụta ugboro ugboro iji nweta ọsọ ọsọ ọsọ na njikwa ngbanwe dị nro ziri ezi. Nkuchi nke teknụzụ ọhụụ abughi naanị ime ka ogo na ntụkwasị obi dị na igwe ahụ ka mma kamakwa ọ na - edozi nsogbu teknụzụ na nnukwu ike igwe induction igwe eji eme oku ma mee ka o kwe omume ịrụ ọrụ 100% ọrụ ọrụ.
Igwe ọkụ dị na Induction
DW-HF-160KW Ngwunye Ngwunye Ngwunye